အဆီကျဆေးတွေသောက်ပေမဲ့ ပိန်မလာရတဲ့အကြောင်းက… – Trend.com.mm
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွယ်လှပစေဖို့ ထုတ်ထားတဲ့အဆီကျဆေး၊ပိန်ဆေးတွေအများကြီးပေါ်နေသလို အလွယ်တကူကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုသူတွေဟာ ဒီဆေးတွေကိုမှီဝဲသုံးစွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုသုံးစွဲကြတဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ကတော့အစွမ်းထက်စွာပဲ ပိန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကကျ မပိန်ဘူး။ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲ။ပိုပြီးတောင်ဝလာသေးတယ် စသဖြင့် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါက ဘာကြောင့်လဲ??
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမတူတဲ့အတွက် သူက ၁၀ရက်နဲ့ဝိတ်ကျပေမဲ့ ကိုယ်က ရက် ၂၀မှဝိတ်ကျတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ဒီဆေးသောက်ပုံသောက်နည်းမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ၀ိတ်မကျတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ အဆီကျဆေးတွေသောက်ပေမဲ့ ပိန်မလာဘူးဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ငြိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
ဒီဆေးလေးသောက်ရုံနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အလွယ်တကူကျသွားမယ်လို့ယုံကြည်နေတာက ၀ိတ်မကျရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ဒါတွေက ပိန်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ ဒါကို အလွန်အမင်းယုံကြည်အားကိုးပြီး ကိုယ်စားချင်တာတွေချည်းစားနေရင် ၀ိတ်ကျဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပါပဲ။အဆီအဆိမ့်အစားအစာတွေမလျှော့ပဲ ဆေးတစ်ခုတည်းအားကိုးနေရုံနဲ့ ၀ိတ်မကျပါဘူး။ပိုပြီးတောင်ဝိတ်တက်လာပါဦးမယ်။အဆီကျဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်စားတဲ့အစားအစာကိုလည်းချင့်ချိန်ပြောင်းလဲစားသုံးဖို့လိုအပ်ပြီး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းပုံမှန်တွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိလာမှာပါ။
အဆီကျဆေးမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေဟာ တစ်ချို့လူတွေနဲ့တည့်ပေမဲ့ နှလုံးရောဂါ၊ရင်တုန်မူးဝေဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါစတဲ့ရောဂါတွေရှိနေရင် ဒီဆေးတွေက အများအားဖြင့် မတည့်ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါ အော့အန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်။အလွန်အမင်းဝမ်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်။ဒီလိုဖြစ်နေရဲ့နဲ့ဆက်သောက်နေမယ်ဆိုရင်ပိန်လာမှာမဟုတ်ပဲ ဆိုးကျိုးကပိုဖြစ်လာမှာပါနော်။ဒါက သင်နဲ့ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသတိပေးနေတာပါ။၀ိတ်ကျခြင်းရဲ့အစမဟုတ်ပါဘူး။
အဆီကျဆေးကိုသောက်တယ်။ပိန်သွားတယ်။ပိန်သွားတဲ့ခဏရပ်လိုက်တယ်။ပြန်ဝလာရင် ထပ်သောက်တယ် စသဖြင့် သောက်လိုက်ရပ်လိုက် ပြန်သောက်လိုက်သံသရာဟာ သင်ဝိတ်မကျခြင်းရဲ့ တရားခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူအနည်းစုကသာ အဆီကျဆေးကိုစစချင်း တစ်နေ့တစ်လုံး ၊နောက်ပိုင်းကျတော့ ရက်ခြားစီစသဖြင့် အစားလေးလည်းထိန်း၊အဆီကျဆေးလည်းသောက်ရင်း ပုံမှန်ဖြတ်သန်းသွားကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သောက်လိုက် ရပ်လိုက်လုပ်နေမှန်ဆိုရင်ဝိတ်က ကျလိုက်၊တက်လိုက် သံသရာလည်နေမှာအမှန်ပါပဲ။
ဘယ်လိုဆေးမျိုးမဆို ဆေးပတ်လည်အောင်သောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ သုံးရက်ခြားတစ်ခါလောက်မေ့နေမယ်။နှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက်မေ့ပြီးမသောက်ဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုရင် ဒါက ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆေးသောက်မယ်ဆိုရင်လည်း မမေ့လျောပဲသောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။
အဆီကျဆေးသောက်ဖို့စဉ်းစားထားရင် အရင်ဆုံးကိုယ်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်
လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား အစားနဲ့ထိန်းပြီးချကြည့်ပြီးပြီလား?စသဖြင့် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှလုပ်ကြည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီအဆီကျဆေးဆိုတာ အစစ်ရှိသလို အတုတွေကလည်းပေါများနေတာပါ။ကိုယ်က အတုမိတဲ့အခါဒီဆေးတွေရဲ့ Side effect တွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမလိုအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ်သောက်မယ့်ဆေးအကြောင်းသေချာသိထားဖို့၊စုံစမ်းဖို့လိုအပ်ပြီး ဒီဆေးတွေကိုအားမကိုးခင်ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် အရင်လုပ်ကြည့်ပါဦးလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအဆီကျဆေးတွေမပါလည်း သင်ဝိတ်ကျအောင်လုပ်နိုင်လို့ပါ။
အဆီကျဆေးသောက်မယ့်အစား အစားလေးပုံမှန်ထိန်း လေ့ကျင့်ခန်းလေးပုံမှန်လုပ်ပေးသွားရင်အကောင်းဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့ အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူး။အစားလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့အဆီကျဆေးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး ဒီအပေါ်က အချက်လေးတွေကိုရှောင်ကာ သေချာမှန်ကန်စွာသောက်သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနခေ့တျေကွီးထဲမှာ ခန်ဓာကိုယျပိနျသှယျလှပစဖေို့ ထုတျထားတဲ့အဆီကဆြေး၊ပိနျဆေးတှအေမြားကွီးပျေါနသေလို အလှယျတကူကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခလြိုသူတှဟော ဒီဆေးတှကေိုမှီဝဲသုံးစှဲလရှေိ့ကွပါတယျ။ဒီလိုသုံးစှဲကွတဲ့အခါမှာ တဈခြို့ကတော့အစှမျးထကျစှာပဲ ပိနျသှားတယျ။ဒါပမေဲ့ တဈခြို့ကကြ မပိနျဘူး။ဒီတိုငျးကဒီတိုငျးပဲ။ပိုပွီးတောငျဝလာသေးတယျ စသဖွငျ့ ရှိတတျကွပါတယျ။ဒါက ဘာကွောငျ့လဲ??
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံမတူတဲ့အတှကျ သူက ၁ဝရကျနဲ့ဝိတျကပြမေဲ့ ကိုယျက ရကျ ၂ဝမှဝိတျကတြာမြိုးလညျးရှိတတျတယျ။ဒီဆေးသောကျပုံသောကျနညျးမှားနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ ၀ိတျမကတြာလညျးဖွဈရငျဖွဈနိုငျတယျ။ပွီးတော့ အဆီကဆြေးတှသေောကျပမေဲ့ ပိနျမလာဘူးဆိုတာ တကယျတော့ ဒီအခကျြတှနေဲ့ငွိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပါပဲ။
ဒီဆေးလေးသောကျရုံနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျအလှယျတကူကသြှားမယျလို့ယုံကွညျနတောက ၀ိတျမကရြခွငျးရဲ့အကွောငျးတဈခုပါပဲ။ဒါတှကေ ပိနျဖို့အတှကျရညျရှယျထုတျလုပျထားတာမှနျပမေဲ့ ဒါကို အလှနျအမငျးယုံကွညျအားကိုးပွီး ကိုယျစားခငျြတာတှခေညျြးစားနရေငျ ၀ိတျကဖြို့ဆိုတာ ဝလောဝေးပါပဲ။အဆီအဆိမျ့အစားအစာတှမေလြှော့ပဲ ဆေးတဈခုတညျးအားကိုးနရေုံနဲ့ ၀ိတျမကပြါဘူး။ပိုပွီးတောငျဝိတျတကျလာပါဦးမယျ။အဆီကဆြေးသောကျမယျဆိုရငျ ကိုယျစားတဲ့အစားအစာကိုလညျးခငျြ့ခြိနျပွောငျးလဲစားသုံးဖို့လိုအပျပွီး ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးလညျးပုံမှနျတှဲလုပျပေးမယျဆိုရငျ ထိရောကျတဲ့ရလဒျကိုရရှိလာမှာပါ။
အဆီကဆြေးမှာပါဝငျတဲ့အရာတှဟော တဈခြို့လူတှနေဲ့တညျ့ပမေဲ့ နှလုံးရောဂါ၊ရငျတုနျမူးဝဖွေဈတတျတဲ့ရောဂါစတဲ့ရောဂါတှရှေိနရေငျ ဒီဆေးတှကေ အမြားအားဖွငျ့ မတညျ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါ အော့အနျတာမြိုးတှဖွေဈလာမယျ။အလှနျအမငျးဝမျးသှားတာမြိုးတှဖွေဈလာမယျ။ဒီလိုဖွဈနရေဲ့နဲ့ဆကျသောကျနမေယျဆိုရငျပိနျလာမှာမဟုတျပဲ ဆိုးကြိုးကပိုဖွဈလာမှာပါနျော။ဒါက သငျနဲ့ဓာတျမတညျ့ဘူးဆိုတဲ့အကွောငျးသတိပေးနတောပါ။၀ိတျကခြွငျးရဲ့အစမဟုတျပါဘူး။
အဆီကဆြေးကိုသောကျတယျ။ပိနျသှားတယျ။ပိနျသှားတဲ့ခဏရပျလိုကျတယျ။ပွနျဝလာရငျ ထပျသောကျတယျ စသဖွငျ့ သောကျလိုကျရပျလိုကျ ပွနျသောကျလိုကျသံသရာဟာ သငျဝိတျမကခြွငျးရဲ့ တရားခံလညျးဖွဈပါတယျ။လူအနညျးစုကသာ အဆီကဆြေးကိုစစခငျြး တဈနတေ့ဈလုံး ၊နောကျပိုငျးကတြော့ ရကျခွားစီစသဖွငျ့ အစားလေးလညျးထိနျး၊အဆီကဆြေးလညျးသောကျရငျး ပုံမှနျဖွတျသနျးသှားကွတာပါ။အဲ့ဒီလိုမဟုတျပဲ သောကျလိုကျ ရပျလိုကျလုပျနမှေနျဆိုရငျဝိတျက ကလြိုကျ၊တကျလိုကျ သံသရာလညျနမှောအမှနျပါပဲ။
ဘယျလိုဆေးမြိုးမဆို ဆေးပတျလညျအောငျသောကျပေးဖို့လိုပါတယျ။အဲ့လိုမဟုတျပဲ သုံးရကျခွားတဈခါလောကျမနေ့မေယျ။နှဈရကျခွားတဈခါလောကျမပွေီ့းမသောကျဖွဈပွနျဘူးဆိုရငျ ဒါက ပုံမှနျအလုပျလုပျမှာမဟုတျပါဘူး။အကြိုးသကျရောကျမှုလညျးရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ဆေးသောကျမယျဆိုရငျလညျး မမလြေ့ောပဲသောကျဖွဈအောငျကွိုးစားပါ။
အဆီကဆြေးသောကျဖို့စဉျးစားထားရငျ အရငျဆုံးကိုယျဘာတှလေုပျပွီးပွီလဲ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျ
လုပျကွညျ့ပွီးပွီလား အစားနဲ့ထိနျးပွီးခကြွညျ့ပွီးပွီလား?စသဖွငျ့ ကိုယျလုပျနိုငျတာမှနျသမြှလုပျကွညျ့ထားဖို့လိုအပျတယျလို့ပွောခငျြပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ဒီအဆီကဆြေးဆိုတာ အစဈရှိသလို အတုတှကေလညျးပေါမြားနတောပါ။ကိုယျက အတုမိတဲ့အခါဒီဆေးတှရေဲ့ Side effect တှကွေုံရပါလိမျ့မယျ။ဒီလိုမလိုအပျတဲ့ဆိုးကြိုးတှမေဖွဈခငျြရငျ ကိုယျသောကျမယျ့ဆေးအကွောငျးသခြောသိထားဖို့၊စုံစမျးဖို့လိုအပျပွီး ဒီဆေးတှကေိုအားမကိုးခငျကိုယျလုပျနိုငျသလောကျ အရငျလုပျကွညျ့ပါဦးလို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအဆီကဆြေးတှမေပါလညျး သငျဝိတျကအြောငျလုပျနိုငျလို့ပါ။
အဆီကဆြေးသောကျမယျ့အစား အစားလေးပုံမှနျထိနျး လကေ့ငျြ့ခနျးလေးပုံမှနျလုပျပေးသှားရငျအကောငျးဆုံးပါ။ဒါပမေဲ့ အခြိနျလညျးမပေးနိုငျဘူး။အစားလညျးမဖွတျနိုငျဘူးဆိုရငျ စဈမှနျတဲ့အဆီကဆြေးကိုရှေးခယျြဝယျယူပွီး ဒီအပျေါက အခကျြလေးတှကေိုရှောငျကာ သခြောမှနျကနျစှာသောကျသုံးပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။